I-Crater Lake "Bunkhouse" ku-100 acre ranch nemizila - I-Airbnb
I-Crater Lake "Bunkhouse" ku-100 acre ranch nemizila
478 okushiwo abanye
Prospect, Oregon, i-United States
I-ranch ibungazwe ngu-Barbara
I-Ranch yangasese ethi "Bunkhouse" ihlezi endaweni eseduze nezingcezu zehhashi & barn w/ ukubukwa kwesigodi, izintaba, nokufinyelela ezindleleni ezinhle zokuqwala izintaba.
"I-Bunkhouse" igcina ubuhle be-Rustic Bunkhouse kodwa ngaphakathi ijabulela ukunethezeka okusha, isitayela nezinsiza!
Yisitudiyo esikhulu sakamuva (20X40) esivulekile esivulekile/i-bedrm w/ kitchenette & nebhavu langasese (ishawa ye-clawfoot/ibhavu). Umbhede wosayizi wenkosi nombhede wamawele owengeziwe uma unowesithathu ohambayo nawe, konke egumbini elilodwa. Futhi, i-TV ne-WiFi
Ipulazi lethu litholakala kumamayela angu-2 1/2 (entshonalanga) ngaphandle kwedolobhana lase-Prospect, eduze nomfula i-Rogue, i-Lost Creek Lake, kanye namamayela ambalwa ukusuka e-Barr Creek enhle, e-Mill Creek nase-Pearsony Falls, kanye namamayela angu-28 ukuya. ukungena kwe-Crater Lake National Park eningizimu. Isohlangothini oluhle lwe-Crater Lake National Park eduze kwe-Rogue-Umpqua Scenic Byway.
I-Bunkhouse iyindawo enokuthula nenethezekile ngemva kosuku lokuzijabulisa lwase-Southern Oregon. Iphelele kuma-solo, izithandani noma nge-plus one.
Futhi epulazini kukhona inqolobane yamahhashi, ikhaya lomnikazi, indlu eqashisayo yeholide, kanye nezakhiwo ezingaphandle, amachibi amakhulu ama-2, nemizila eminingi (amahektha ayi-100 plus) ongahlolwa kanye nezilwane zasendle okufanele zibukwe.
4.96 out of 5 stars from 478 reviews
4.96 · 478 okushiwo abanye
Abekho omakhelwane ababonwayo. Uzoba nekhabethe langasese kodwa wabelane nathi ngale ndawo, amahhashi, inja eyodwa, izinyamazane, izimpungushe, izimpungushe, izikhova, amadada, amahansi, kanye nenye indawo eqashiswayo yezivakashi eduze (phansi kancane ngomgwaqo nangemuva kweBunkHouse ).
Idolobhana eliseduze laseProspect linePizza Parlour, igalaji likaphethiloli, iposi, umtapo wolwazi, Ihhotela elinomlando, iProspect Cafe, kanye nemakethe encane yezwe -Prospect Market, kanye neB&D's Deli. I-Prospect ibuye ibe nezimpophoma ezintathu ezinhle. Kwaziwa ngokuhamba ogwadule nokudoba emfuleni iRogue. I-Lost Creek Lake iyimizuzu eyi-10 entshonalanga.
Phezulu ngomgwaqo omkhulu, cishe amamayela angu-12, kune-Beckies Cafe (ukupheka kwezwe okuhle nophaya bamaberry bendawo). Yindawo ekahle yokumisa ukudla kwasekuseni, kwasemini, noma kwakusihlwa endleleni futhi lapho ubuya e-Crater Lake National Park.
Sihlala epulazini futhi siyatholakala ukuze sinikeze izivakashi zethu ulwazi, izinkomba zendawo, kanye nosizo lokwenza ukuhlala kwakho kube indawo ekahle yokubalekela. Ungase ungasiboni noma ungasiboni ngaphandle uma udinga okuthile noma uhlanganyele nathi esibayeni ngesikhathi sokudla. Siyayihlonipha imfihlo.
Siyaqaphela kakhulu i-Covid 19 futhi silandela umthetho olandelwayo emphakathini kanye nokuhlanza nokuhlanza.
Umgomo wethu uwukuhlanganyela lesi siqeshana semvelo esihle nabanye abangasijabulela ngokugcwele futhi babe nolwazi olunethezekile nokuzolile njengoba behlola i-Oregon eseningizimu.
Sihlala epulazini futhi siyatholakala ukuze sinikeze izivakashi zethu ulwazi, izinkomba zendawo, kanye nosizo lokwenza ukuhlala kwakho kube indawo ekahle yokubalekela. Ungase ungas…
Hlola ezinye izinketho ezise- Prospect namaphethelo